Serbia: Paradisan’ireo Mpifoka Sigara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Janoary 2019 14:02 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, 日本語, 繁體中文, 简体中文, Español, македонски, English
Nanamarika ny Androm-pirenena ho an'ny tsy Fifohana Sigara i Serbia ny 31 Janoary teo, saingy, araka ilay voalazan'ny bilaogera Serbiana iray, “Paradisa sy El Dorado an'ireo mpifoka sigara i Serbia.”
Ity ambany ity ny dikatenin'ilay lahatsoratr'i Predator tamin'ny 29 Janoary:
Mifehy ireo tanàna, vohitra ary kianja Serba ireo mpanapoizina ara-dalàna. Tsy misy Lameka, El Dorado ary Paradisa ngeza nóho i Serbia ho an'ireo mpifoka sigara. Mifoka eny rehetra eny ny vahoaka […]. Mahita olona mifoka aho anatin'ireo trano fivarotana mofo/hena/mofomamy, ireo trano fitsaboana, birao, andrimpanjakana, isan'andro. Mazava ho azy, misy ilay marika ofisialy anatin'ireny trano ireny – tsy azo ifohana sigara.
Tamin'ny faran'ny taona, nijery mpanao mofo nifoka sigara nandritra ny dimy minitra mahery aho tanatin'ny fotoana fialany voly tao amin'ny toerana fanamboarana mofo Toma. Nandrehitra sigara izy ary nanaparitaka lavenona manodidina ny milina famokarana ny koba. Azonao an-tsaina ve ny nataony avy eo? Natsipiny tamin'ny tany ny sigarany ary nanohy namisaka ny koba fanamboarana pizza izy avy eo.
Maro ireo tranga mitovitovy amin'izany ao Belgrade isan'andro. Tsy misy mihetsika. Mangina ny rehetra, mody tsy mahita ny fanapoizinan'ireo mpifoka azy ireo.
Nankao Belgrade avy any Etazonia i One Serb ho an'ny Taombaovao, rehefa tany ivelany nandritra ny fotoana maro. Nanontany ny fahitany an'i Serbia aho. Hmm, inona no azoko ambara aminao? Ankona ilay lehilahy raha nahita olona maro be nifoka sigara teny amin'ny araben'i Belgrade sy nanary ny tain-tsigarany eny amin'izay alehany rehetra eny. Nilaza tamiko izy fa mbola tsy nahita fako, harona plastika, taratasy, ary baoritra maro be toy izao an-dàlamben'ny renivohitr'i Serbia izao. […]
Nanadihady ny vokatry ny fifohana sigara eo amin'ny lafiny toekarena sy fahasalamana i Nikola Tosic tao amin'ny bilaoginy volana vitsy lasa izay:
Ampahany lehibe anatin'ny ranomody mavesatra ho an'ny fiarahamonina amin'ny fomba maro ny sehatry ny famokarana sigara ao Serbia.
Ny governemanta no manao ny dingana voalohany amin'ny fanohanany ny famokarana sigara mba hanatsaràna ny kalitaony sy hahatonga ny vidiny ho azon'ireo mpamokatra ekena. Tena avo dia avo ny fitadiavana ireo sigara ary tsy ampy ny vokatra amboarina ao an-trano. Io no mampiala voalohany indrindra ny volan'ireo mpandoa hetra. Mikirakira ny vidin'ny sigara miaraka amin'ny volantsika ny governemanta mba hanomezana fahafahampo hatrany ireo mpamokatra sigara.
Ireo mpamokatra toa ny Phillip Morris sy ny British-American Tobacco no manao ny dingana faharoa. Mandrahona ny governemanta handroaka mpiasa ry zareo raha tsy tsara ho an'ny fandraharahany ny toejavatra miseho.
Ny tinady ho an'ny sigara no dingana fahatelo. Anisan'ireo avo indrindra eran-tany ny tahan'ny mpifoka sigara ao Serbia. […]
Ny fandaniana amin'ny fitsaboana no dingana fahefatra. Izy ireo no mameno ny vesatra goavana indrindra eo amin'ny tetibolam-panjakana. Mampiasa ireo loharanom-bola mihoatra nóho ny hafa ireo mpifoka sigara, satria mety ho voan'ny homamiadana, ny aretim-po sy lalandrà kokoa ry zareo, izay lafo dia lafo ny fitsaboana izany. […]